SAWIRRO-Musharax Farmaajo oo soobandhigay qorshihiisa waxqabad haddii la doorto. – Radio Daljir
SAWIRRO-Musharax Farmaajo oo soobandhigay qorshihiisa waxqabad haddii la doorto.
Janaayo 26, 2017 12:27 g 0
Mudane Farmaajo ayaa ku dhalliilay Madaxweynaha haatan xilka haya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu aad u dhiirrigeliyay in dastuurka la baal maro isaga oo ku eedeeyay inuu 6 bilood ah oo aan sharciga waafaqsaneyn uu xafiiska sii joogo. Waxaa laga doonayay madaxweynaha ayuu yiri inuu dhawro dastuurka iyo shuruucda lagu heshiiyay.
Mudane Farmaajo ayaa yiri “Waxaad arkeysaan in Madaxweyna uu xafiiska ku fadhiyo harci darro muddo 6 bilood ah. Waxay ahayd in uu doorasho qabto bishii September ee sanadkii hore. Waxyaabaha dib noo dhigay ayay kamid tahay inaan sharciga la ixtiraamin.”
“Haddii ay shacabka iyo dowladdu ay is raacaan oo ay isgarabsadaaan Al Shabaab labo arrimood ayaa hor yaalla in ay kala doortaan; haddii ay heshiis rabaan inaan soo dhaweyno oo aan tabobar iyo dhaqancelin u furno. Haddii ay diidaan aniga ayaa hormuud ka noqonaya dagaalka lagu qaadayo oo tuutaha ciidanka xiranaya. Meel ay ku dhuuman karaan maleh oo maalin qura ma sii jiri karaan. Waxa ay noo laynayaan oo ay noo qarxinayaan wax kale ma aha. Waxaa sabab u ah shacab iyo dowladda oo aan wada shaqeynin.
Ugu dambeyntii Mudane Farmaajo ayaa kula dardaarmay haweenka in ay kaalin mug leh ka qaataan ololaha uu ku doonayo inuu dalka ku hoggaamiyo. “Haweenka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay xildhibaannada la hadlaan oo ay u sheegaan in ay codkooda meel fiican ku ridaan. Maxaa yeelay codkaas haddii mar meel xun lagu rido 4 sano lama soo celin karo.”
DHEGEYSO-Warkii fiidnimo ee Daljir iyo weriye Khadar Cawl Ismaaciil.